La Villa de Ararapira, tanàna matoatoa any Brezila | Vaovao momba ny dia
Carmen Guillen | | America, Brasil
Tsy mila mandeha lavitra ianao vao hahita tena izy tanàna sy vohitra matoatoa izay nanjary tsy dia misy dikany intsony nandritra ny taona maro. Raha tsy nandeha lavitra intsony, maro amin'ireo tanànan'ny tanànanay "castilla" no lasa tsy misy mponina intsony ka amidy amin'ny endrika an'ohatra ary nanolotra asa sy trano aza mba hamerenany azy ireo indray. .
Saingy ankehitriny isika dia resin'ny tanànan'ny Brasil, na ny tena izy, tanàna iray any Brezila. Momba ny Vohitra Ararapira, tanàna matoatoa izay tsy misy olona sahy mitsidika azy. Raha te hahalala ianao hoe inona ny antony mahatonga an'ity tanàna ity irery foana, dia vakio hatrany eto ambany. Hahagaga anao izany!
1 Toe-javatra sy tantara
2 Tanàna matoatoa any Espana
Toe-javatra sy tantara
Ity villa ity dia eo amin'ny sisin-tany anelanelany São Paulo sy Paraná. Ny isan'ny mponina farafaharatsiny dia mponina 500 fotsiny ary ankehitriny dia fantatra amin'ny anarana hoe tanàna matoatoa. Ao amin'izany no ahitantsika trano fiangonana hatramin'ny trano am-polony, fasana, sns, ary izay rehetra ao anaty fitehirizana tena tsara, na eo aza ny fotoana sy ny tsy firaharahiany.
Ho an'ny tanàna ihany miditra amin'ny sambo na catamaran, ary rehefa tratra dia mangatsiaka kely ny fahatsapana amin'ny vatana. Manome ny fahatsapana rehetra fa toerana nilaozana haingana izy, toy ny apokalypsy zombie avy amina andian-tantara foronina. Mbola mijanona miaraka amin'ireo varavarana mihidy ny trano, fa ny atin'ny ankamaroan'izy ireo dia azo jerena amin'ny fitaratra. Ny zava-drehetra ara-dalàna hatreto: misy kojakoja sasany, lakozia, latabatra, seza, sofa ... Toa noroahina tsy ho ela koa ny fiangonana. Ny alitara misy azy dia mbola milamina tsara ary toy ny hoe hiseho amin'ny fotoana tsy ampoizina ny pretra: mijanona ny sary, labozia, dabilio, ...
Raha ny tena izy dia anontaniana ireo mpifanolo-bodirindrina aminy ary tsy misy mahalala mazava ny ora na ny antony nahatongavan'ireo mponina. Ny antony mahatonga ny fanombantombanana koa tsy fantatra, tsy azo ihodivirana.
Ireto ny sasany amin'ireo kinova malaza indrindra. Mitsara ho anao:
Dika voalohany: Ny mponina voalohany tao an-tanàna dia ho tonga tamin'ny fiandohan'ny fanjanahana an'i Brezila ary ny fiaingenan'izy ireo dia vokatry ny fifanolanana teo amin'i São Paulo sy Paraná. Hatramin'ny taona 1920 dia an'i Sao Pablo izy ary avy eo Paraná dia nahazo an'i Ararapira, saingy nilaozany.
Dika faharoa: misy ifandraisany amin'ny erosion. Ilay tanàna dia atelin'ny tany, atelin'ny rano ara-bakiteny, noho ny herin'ny fiakaran'ny onja sy ny fiovan'ny toerana ara-jeografika, taorian'ny nanokafana ny fantsona Ararapira ho an'ny fandalovana sambo. Ity no iray amin'ireo kinova azo inoana indrindra amin'ny antony nahafahan'ny mponina nanangona ny kitapony sy namela azy tamin'ny rivotra madio tany ampitan'i Brezila. Raha ny filazan'ny mponina amin'ny tanàna akaiky sy ny matihanina amin'ny tontolo iainana dia raha mitohy ny filentehany dia hatelin'ny rano tanteraka ilay tanàna.
Satria ny antsipiriany farany hanampy an'ity tanàna tsy fantatra ity dia ity toerana ity dia raisina ho toy ny lova voajanahary ny maha-olombelona ary tahiry biosfera.
Tanàna matoatoa any Espana
Araka ny efa nolazainay teo aloha, ao amin'ny firenentsika koa dia manana tanànan'ny matoatoa antsika manokana izahay, ary santionany amin'ireto rehetra voalaza etsy ambany ireto:
Escó, tanànan'i Zaragoza.
Ochate, tanànan'i Burgos.
Os Teixois, Vahoaka asterianina.
Belchite, tanàna mora ampiasaina hafa izay manampy ny lisitra.
Ilay Mussara, tanànan'i Tarragona.
Voankazo miantra, ao Cáceres.
Umbralejo, any Guadalajara.
Ahoana no ahitanao ny mety hipetrahana? Vohitra Ararapira na tanàna vitsivitsy amin'ireo voalaza ao amin'ny fehintsoratra teo aloha? Handefa ny "candidat" anao hitsidika azy fotsiny ve ianao sa ho sahy hipetraka ao aminy indray? Inona avy ireo tanàna, tanàna na tanàna eran'izao tontolo izao fantatrao izay tsy nisy mponina nandritra ny taona maro ary inona no antony nanaovan'izy ireo izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » The Villa de Ararapira, tanànan'ny matoatoa ao Brezila
Torohevitra hitsidihana ireo toerana manintona an'i Beijing